Sawirro:-Khasaaraha ka dhashay Duqeyn ka dhacday Jannaale oo la soo bandhigay - Damqo
Sawirro:-Khasaaraha ka dhashay Duqeyn ka dhacday Jannaale oo la soo bandhigay
Ciidamada Maraykanka oo ay wehlinayaan kuwa Soomaali ah ayaa habeen kahor waxa ay duqeymo diyaaradeed ay ka fuliyeen Degmada Jannaale oo kamid ah Degmooyinka ay gacanta ku hayaan Al-shabaab.
Al-shabaab ayaa sheegtay inay ka hortageen weerarkii Ciidamada Maraykanka iyo kuwa dowlada ay ku soo qaadeen Degmada Jannaale ee Gobolka Shabeellaha Hoose,isla markaana goobihii lagu dagaallamay kaga carareen qalab ciidan sida ay sheegeen Al-shabaab.
Dhinaca kale Diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo taageerayay ciidamo la sheegay in ay lug ku galeen degmadaasi ayaa la sheegay inay gantaalo ku garaaceen xaafado kuyaala deegaanka Janaale, lamana soo sheegin khasaaro nafeed oo ka dhashay duqentaasi.
Gantaalada ayaa la sheegay in ay ku dhaceen guryo kuyaala deegaanka Janaale, waxaana khasaaro bur bur uu gaarsiiyay duqeyta dhowr guri oo kuyaala deegaanka Janaale oo la sheegay in shacab degnaayeen.
uploads/2019/02/2-31.jpg” alt=”” width=”768″ height=”576″ />
“alignnone size-full wp-image-56920″ src=”https://damqo.com/wp-content/uploads/2019/02/13-4.jpg” alt=”” width=”768″ height=”576″ />
Previous Dhowr Kaniisad oo la weeraray iyo kuwo kale oo la gubay
Next Sawirro:-Golaha Wasiirada Puntland oo la dhaariyey